Utongi hwaJehovha hukuru
“Jehovha ava Mambo!” (1)
“Zviyeuchidzo zvenyu zvakavimbika” (5)
93 Jehovha ava Mambo!+ Akapfeka kukudzwa kunoshamisa;Jehovha akapfeka simba;Anoripfeka sebhandi. Nyika* yakanyatsosimbiswa;Haigoni kubviswa pairi.* 2 Chigaro chenyu cheumambo chakasimbiswa kare kare;+Makagara muripo kubvira nariini.+ 3 Nzizi dzakaita mafungu, haiwa Jehovha,Nzizi dzakaita mafungu dzikadzvova;Nzizi dzinoramba dzichiita mafungu, dzichitinhira. 4 Mukuru kupfuura mvura zhinji iri kutinhira,Ane simba kupfuura mafungu egungwa,+Jehovha anokudzwa kumusoro.+ 5 Zviyeuchidzo zvenyu zvakavimbika kwazvo.+ Utsvene hunoshongedza* imba yenyu+ nguva dzese, haiwa Jehovha.
^ Kana kuti “Nyika inobereka.”
^ Kana kuti “kuzununguswa.”
^ Kana kuti “hwakakodzera.”